BlackBerry izixazululo egxile ngomphumela yenkampani yakho — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
BlackBerry izixazululo egxile ngomphumela yenkampani yakho
BlackBerry — akuyona amafoni smart nje kanye amaphilisi, usuphothuliwe izixazululo technical ukusekela ibhizinisi lakho.
AKUDINGEKI amathoyizi namathuluzi
Uphiko ebaluleke kakhulu yokuphumelela inkampani zanamuhla abasebenzi bayo kanye namathuluzi ukuze kuqinisekiswe ukubambisana kwazo, ukusekela ukuphumelela komsebenzi wabo ezingeni eliphezulu. Futhi uma unganakile, wena njengoba umphathi top, ebheka emuva bonke ezihlukahlukene kumadivayisi eselula emakethe ukuze enze esiphethweni ngobuze — zabo okulingana ke sethula wena BlackBerry.
Kuthiwani uma izinkinga zakho ngeke ixazululwe ngokushesha, izinqumo zakho ziba sangamabomu kakhudlwana, futhi idatha setha ukutholwa yabo kuyohlale ngakwesokunene? Yebo, lokho kungase kube yiqiniso — BlackBerry.
Ngokuphazima zokusebenza million BlackBerry. Ayikho uphinda emva kwakho funny cat izwi, akukho izingilazi Emulator kabhiya, futhi kukhona dancing girls Japanese. Kodwa kukhona indawo engcono kunazo zonke emhlabeni e-mail iklayenti nge okunamathiselwe support futhi HTML, the best in the world of Isithunywa osheshayo nge support for imiyalezo ezinkampani, isicelo kokufundwa nokuhlelwa lwamafayela spreadsheet, amadokhumenti wombhalo, PowerPoint, PDF-ifayela, amadokhumenti abezindaba, kanye eziningi ezinye izicelo ibhizinisi. Kubalulekile kakhulu ukuthi basuke bonke yakhelwe ngendlela zokuthuthukisa ukusebenza kwakho kanye ukukhiqiza abasebenzi bakho.
BlackBerry amadivayisi ngokuyinhloko zithathelwe indawo computer, futhi inzuzo — zabo ukuhamba. Nge BlackBerry thokozani nina abanjwe sezimoto ngenxa yokuthi ukuhlola imibhalo wathola njalo uphendule imiyalezo e-mail, ngeke zinikeze neziyalezo ozakwabo kuso ngokwaso isithunywa. Ungaqala ingqungquthela, ngisho nemidwebo yakamuva for aphoyintimenti ngesikhathi — BlackBerry wocingo omuhle. Ukuvakashela BlackBerry yakho umane Irreplaceable. Thumela scan idokhumenti umlingani? Isithwebuli akadingi — nje ukuthatha isithombe usebenzisa ikhamera ezahlukene nge autofocus bese uthumela it in imizuzwana. Imisebenzi iye yanquma ukuba manje kuphela elisetshenziswa ehhovisi, isixazululekile ngokushesha on the spot.
Ukulondeka idatha yakho
Kunengi kangangani ukulahleka kwedatha yakho? Kuthiwani uma othile uthola ukufinyelela imibhalo, imibiko, encwadini yakho ikheli? Futhi yingakho abantu abaphumelelayo ukhethe BlackBerry — ezingeni eliphakeme lokulondeka okungathenjelwa kulo. Ngisho noma ulahlekelwa smartphone yakho, ngeke asuswe idatha ngaphandle kolwazi lwakho.